တရုတ်-လာအို ရထားလမ်းပိုင်း၏ အရေးအပါဆုံးလာအိုဘူတာရုံ တည်ဆောက်မှု ဒီဇင်ဘာတွင်အပြီးသတ်မည် - Xinhua News Agency
ဗီယန်ကျင်း၊ အောက်တိုဘာ ၁၁ ရက် (ဆင်ဟွာ)
တရုတ်-လာအိုရထားလမ်း ဘူတာရုံကို လာအိုနိုင်ငံ ဗီယန်ကျင်းမြို့တွင်ဆောက်လုပ်နေဆဲ ဖြစ်သည်။
တရုတ်-လာအို ရထားလမ်းပိုင်း၏ အရေးအပါဆုံးနှင့်အကြီးဆုံးဘူတာရုံတစ်ခုဖြစ်သည့် ဗီယန်ကျင်းဘူတာကို တရုတ်နိုင်ငံ China Railway Construction Group Co.,Ltd မှ တည်ဆောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ဘူတာတွင် စင်္ကြံ ၃ ခုနှင့် ရထားလမ်းကြောင်း ၅ ခုပါဝင်ပြီး ၊ အရန် ရထားလမ်းကြောင်း နှစ်ခုနှင့်အတူ ထပ်တိုး စင်္ကြံ နှစ်ခု ထည့်သွင်းထားကြောင်းသိရသည်။
အကျယ်အဝန်းအားဖြင့် စတုရန်းမီတာပေါင်း ၁၄,၅၄၃ မီတာရှိသည့် ဘူတာတွင် ခရီးသည်အများဆုံး ၂,၅၀၀ ခန့် ဝင်ထွက် သွားလာနိုင်စေရန် တည်ဆောက်ထားကြောင်း ဗီယန်ကျင်းအခြေစိုက် ရထားလမ်းဖောက်လုပ်ရေးနှင့် လည်ပတ်ရေး တာဝန်ကို တရုတ်နိုင်ငံနှင့်အကျိုးတူပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်သည့် Laos-China Railway Co.,Ltd က ဆိုသည်။
ဗီယန်ကျင်းဘူတာသည် စန္ဒကူးတို့မြေ (ဗီယန်ကျင်း) ၏ အငွေ့အသက်များဖြင့် ဒီဇိုင်းတည်ဆောက်ထားသည့် အပြင် တရုတ်-လာအိုနှစ်နိုင်ငံချစ်ကြည်ရေးကိုဖော်ဆောင်သည့် အနေဖြင့် နှစ်နိုင်ငံ ယဉ်ကျေးမှုဓလေ့ထုံး တမ်းများကိုလည်းနက်ရှိုင်းစွာထည့်သွင်းဖော်ဆောင်တည်ဆောက်ထားသည်။
ဘူတာ၏ ပင်မ အဆောက်အဦကို တရုတ်ရိုးရာ ရှေးဟောင်းဗိသုကာလက်ရာ ဖြင့် ဖန်တီးထားပြီး ဗီယန်ကျင်းမြို့၏ သဘာဝပတ်ဝန်ကျင်နှင့်တရုတ်နိုင်ငံ၏ ဂန္တဝင်မြောက် လက်မှုပညာ ပေါင်းစပ်ထားသော တံခါပုံစံလည်း ထည့်သွင်းတည်ဆောက်ထားသည်။
ဘူတာမျက်နှာစာကို အပူပိုင်းမိုးသစ်တောသစ်ပင်များ၏ ပုံရိပ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြင့်တည်ဆောက်ထားပြီး သစ်ကိုင်းပုံ တံစက်မြိတ် ၈ ခုကို ထည့်သွင်းထားသည့်အပြင် သံမဏိ အကြမ်းထည်ဖြင့် ဘူတာအမိုးကိုထောက်ပံ့ထားသည်။ ဘူတာရုံအတွင်းနေသာသည့်အချိန်တွင် ဘူတာမျက်နှာစာသို့ သစ်ပင်ရိပ်ကျနေသည့်သဏ္ဍာန်ပြုလုပ်ထားရာ ၎င်းမှာ စန္ဒကူးမြို့ ပုံရိပ်ကိုအပြည့်အဝ ထင်ဟပ်ဖော်ညွှန်းထားခြင်းဖြစ်သည်။
ဘူတာရုံအတွင်း၌ လာအိုနိုင်ငံ၏ အမျိုးသားအထိမ်းအမှတ်ပန်းဖြစ်သည့် Dok Champa ပန်း၏ အရောင်ကို ကျယ်ပြန့်စွာ ခြယ်သထားသည်။
တရုတ်-လာအိုရထားလမ်းစီမံကိန်းသည် တရုတ်နိုင်ငံက အဆိုပြုတင်သွင်းသည့် ရပ်ဝန်းနှင့် ပိုးလမ်းမအဆိုပြုချက် နှင့် လာအိုနိုင်ငံ၏ ကုန်းတွင်းပိတ်နိုင်ငံမှသည် ကုန်းတွင်းချိတ်ဆက်နိုင်ငံအဖြစ်သို့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးဗျူဟာအောက်တွင် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်သည့်စီမံကိန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
လျှပ်စစ်ဖြင့်လည်ပတ်သည့် ခရီးသည်နှင့်ကုန်တင်ရထားလမ်းကို တရုတ်နိုင်ငံ၏နည်းပညာဆိုင်ရာ စံချိန်စံညွှန်းများနှင့် အပြည့်အဝ စီမံခန့်ခွဲ ပြီး တည်ဆောက်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ တည်ဆောက်ရေးစီမံကိန်းကို ၂၀၁၆ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာတွင်စတင်ခဲ့ပြီး ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာတွင် စတင်ပြေးဆွဲရန်လျာထားကြောင်းသိရသည်။ (Xinhua)
GLOBALink | A glimpse of Lao capital station of China-Laos Railway
Withaconstruction area of 14,543 square meters, the station can accommodateamaximum 2,500 passengers, according to the Laos-China Railway Co., Ltd.,aVientiane-based joint venture in charge of the railway’s construction and operation.
The Vientiane Station, reflecting the design concept of “the city of sandalwood (Vientiane), the friendship between China and Laos,” has deeply integrated the cultural traditions of the two countries.
The station’s main building takes the Chinese traditional ancient architecture stretch ratio as the benchmark, and combines the environmental characteristics of Vientiane with the Chinese classic architecture’s door style.
The facade extracts the image elements of tropical rainforest trees, and installs eight branches shaped eaves and columns with undecorated steel structure to support the station hall roof. When the sun shines on the station, it looks like many trees casting shadows on the facade, which fully highlights the elegance of “the city of sandalwood”.
The China-Laos Railway isadocking project between the China-proposed Belt and Road Initiative and Laos’ strategy to convert itself fromalandlocked country toaland-linked hub.